“Matoky An’ilay Fampanantenana Aho” | Diary 2015
TANTARANY Efa nigadra tany amin’ny fonja fito izy ary nampijalijalina be. Nitory ny vaovao tsara momba ny Fanjakan’Andriamanitra foana anefa izy.
TAMIN’NY 1948 aho no nanomboka nivory niaraka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tany Blanco Arriba ilay fivoriana, ary niaraka tamiko i Paula vadiko sy ny zanakay vavy. Tsy maintsy nandeha 40 kilaometatra izahay nandroso sy niverina, nefa tsy tapaka fivoriana mihitsy. Natao batisa izahay mivady tamin’ny 3 Janoary 1949.
Voasambotra izaho sy ny mpiara-mivory sasany, enim-bolana tatỳ aoriana, ary nomelohina higadra telo volana. Natory tamin’ny tany izahay, ary indray mandeha isan’andro no mba nisakafo, sady amin’izay akondro sy dite. Norahonan’ny manam-pahefana izahay rehefa nafahana, satria tsy tiany hitory intsony. Mbola nivory sy nitory ihany anefa izahay, saingy niafinafina. Nanara-maso anay foana ny polisy ka tany an-tranon’olona izahay no nivory, na tany an’alan-kafe, na tany amin’ny toeram-piompiana. Novaovanay ny toerana nivorianay, ka rehefa tapitra ny fivoriana vao nolazaina hoe hatao aiza ny fivoriana manaraka. Nandeha irery izahay rehefa nitory, ary akanjo fitondra miasa no nanaovanay. Tsy nampiasa Baiboly na boky ara-baiboly koa izahay. Na izany aza, dia mbola nigadra imbetsaka ihany aho, teo anelanelan’ny 1949 sy 1959. Fonja fito no efa nampidirana ahy, ary telo ka hatramin’ny enim-bolana no saziko isaky ny nigadra.
Tena nila nitandrina be aho, satria anisan’ireo nanenjika ahy koa ny havako. Nisy fotoana aho natory tany an-tendrombohitra na tany amin’ny toeram-piompiana, mba tsy ho tratra. Tratra ihany anefa aho indraindray. Efa nalefa tao amin’ny fonjan’i La Victoria teto Ciudad Trujillo aho, ary gadra 50 ka hatramin’ny 60 izahay no niray efitra. Mba nisakafo indroa isan’andro izahay tao, ka katsaka no sakafo maraina ary vary kely sy tsaramaso ny antoandro. Mazava ho azy fa mbola nitory tamin’ny voafonja hafa ihany ireo Vavolombelona. Nivory foana koa izahay, ka namerimberina an’izay andinin-teny hainay tsianjery na nitantara ny zavatra hitanay teny amin’ny fanompoana.
Nokapohin’ny miaramila iray tamin’ny vodibasy ny lohako sy ny tratrako, tamin’izaho nigadra farany. Mbola misy fiantraikany amiko ireny fampijaliana ireny hatramin’izao. Nanatanjaka ny finoako anefa izany, sady nanampy ahy hanam-paharetana sy ho tapa-kevitra hanompo an’i Jehovah foana.
Efa 96 taona aho izao ary mpanampy amin’ny fanompoana eo anivon’ny fiangonana. Tsy mahavita mandeha an-tongotra lavitra intsony aho. Mipetraka eo alohan’ny tranonay aho, dia eo no mitory amin’ny mpandalo. Matoky ny fampanantenana momba ilay Fanjakana aho. Fantatro hoe tsy nofinofy fotsiny izany. Efa 60 taona mahery aho izay no nitory momba azy io. Fantatro fa tena hisy ny tontolo vaovao, ary mbola mino izany aho toy ny tamin’izaho nandre voalohany ny hafatra momba ilay Fanjakana. *
^ feh. 3 Nodimandry i Efraín De La Cruz tamin’ity lahatsoratra ity mbola nomanina.